Global Voices teny Malagasy » Sarintany ifarimbonana lasa fitaovana hiadiana amin’ny heloka bevava ao Meksika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2018 13:40 GMT 1	 · Mpanoratra Mercedes Matz Nandika (en) i Clara Guest, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka
Saritany ifarimbonana. Sary avy amin'ny Pixabay, azon'ny rehetra ampiasaina.
Any Meksika, tsy dia zava-baovao ny olan'ny fiarovana -samy milaza ny fitomboan'ny fandikan-dalàna heloka bevava  avokoa ny tatitra an-gazety, ny antontanisa sy ny fomba fijery ankapobeny. Manoloana io toe-javatra io, izay indraindray tsy voafehin'ny sampan-draharaham-panjakana tokony hisahana izany, dia nitodika tamin'ny teknolojia fandraketana an-tsarintany ireo olom-pirenena tsotra ao Mexico City mba hiezaka hampihena ny fiantraikan'ny heloka bevava ao amin'ny vondrom-piarahamoniny.
Araka ny tatitra  iray momba ny fandikan-dalàna heloka bevava tao an-drenivohitra tamin'ny tapany faharoan'ny taona 2018, Mexico City no tanàna faharoa nahitana tranga betsaka indrindra amin'ny halatra mahery vaika tao amin'ny firenena. Izy ihany koa no laharana fahatelo tamin'ireo fanjakana 32 amin'ny resaka fandrobàna an-dalambe ary fahafolo amin'ny vaky trano. Ireo antontan'isa ireo dia ahitana halatra miharo herisetra 96, halatra fiara 27, vaky trano 20, fandrobàna orinasa 44 ary fandrobàna 40 isan'andro.
Ho setrin'ity fitomboan'ny heloka bevava ity, namorona sarintany Google azon'ny rehetra idirana ny vondrona mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina avy any Anáhuac ao Mexico City mba ahafahan'ny olona mandrakitra izay toerana marina nisian'ny heloka bevava. Ny tanjon'ny sarintany dia ny handrakitra sy hanakana ny fandrobana sy ny halatra fiara. Afaka mamela ny antsipiriany momba ny heloka bevava ihany koa ireo mpisera ary manampy ireo fikambanana sivily amin'ny fanangonana antontanisa.
Ny tahirin-kevitra dia mifototra amin'ny tatitra avy amin'ny vavolombelona na ireo niharam-boina mihitsy. Ny sasany amin'ireo tatitra hita ao amin'ny sarintany dia efa notaterina mialoha tany amin'ny manampahefana ihany koa. Ny rohy mankany amin'ny sarintany dia nozaraina ao amin'ny Twitter, izay ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona mametraka fanontaniana sy mifanakalo hevitra momba ny herisetra an-tanàndehibe:
Ry mpifanolo-bodirindrina, aza adinoina ny manamarina ny saritanin'ny heloka bevava tamin'ny volana Jiona. Raha tsy hita ao ny tatitra nataonao, dia ampahafantaro anay.
Tsy zava-baovao ny tetikady mampiasa fampiharana toerana jeografika ho fitaovana hiadiana amin'ny heloka bevava. Hatramin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2016, nanangona vaovao momba ireo karazana heloka rehetra isaky ny tanàna ny tranonkala Hoyo de Crimen . Azo tamin'ny alalan'ny fangataham-baovao tamin'ny sampam-piarovana ao amin'ny renivohitra Meksikana ireo tranga heloka bevava. Ity tetikasa manokana ity dia nahitana fandraketana hetsika toy ny fanafihana, fangalarana fiara ary famonoan'olona, ​​ankoatra ny hafa. Noforonin'ilay programera Diego Valles ny tetikasa ary notohizan'i Carlos Castañeda, izay nanoratra momba izany tao amin'ny u-GOB , tranonkala natokana ho fampiasana ny teknolojiam-pitantanana. Ao amin'ny lahatsoratr'i Castañeda, maneho hevitra ny fomba ahafahan'ny tetikasany manampy ny olona hisoroka ny loza ao an-tanàna i Valles:
Amin'ny alalan'ity tahirin-kevitra ity sy ny fijerena azy ankapobeny, afaka mahafantatra ireo faritra anjakan'ny herisetra be indrindra ny olom-pirenena sy ny manampahefana; afaka misafidy izay toerana tsara hanaovana raharaham-barotra amin'ny fomba tsara kokoa ny mpandraharaha, ary hahafantatra hoe fiantsonana aiza no tokony tsy hijanonana ny mpamily.
Manipika i Hoyo de Crimen fa mikasa “hangataka ny kaontin'ny polisy manamboninahitra sy ireo tompon'andraikitra isaky ny faritra tsirairay” ihany koa ny tetikasa.
Na dia eo aza ny lanjan'ny tetikasa toy izany, dia noterena hampitsahatra ny famoaham-baovao farany i Hoyo de Crimen rehefa nandà tsy hanome ny angon-drakitra ilaina sy hampiely vaovao ofisialy ny manampahefana.
Sarintany ho an'ny karazana heloka bevava rehetra
Nampiasa ny tetikasa sarintany ihany koa ireo mpianatra jeografia ao amin'ny Oniversite Nasionaly mahaleotena ao Meksika (UNAM) mba hanara-maso sy hiampanga izay heloka ao anatin'ny tobin'ny oniversite. Nangonina tamin'ny alalan'ny fanadihadiana an-tserasera  tsy mitononaa anarana izay nozaraina ampahibemaso tao amin'ny Facebook ny tahirin-kevitra. Ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Facebook, mpianatra iray no manazava fa ny fanadihadiana sy ny sarintany dia mikendry ny “hampiseho ireo toerana misy ny herisetra ao amin'ny tobin'ny oniversite”. Manondro ny vondron'ny mpianatra manafintohina, fantatra amin'ny anarana hoe porros , izay efa tratran'ny fiampangana herisetra  nandritra ny hetsi-panoherana milamina nandritra ny taona maro tao amin'ny UNAM ihany koa ny lahatsoratra.
Pikantsarin'ny sarintany natao sy nozarain'ireo mpianatra. Ny sarintany dia zaraina ampahibemaso amin'ny endrika PDF amin'ny alàlan'ny kaonty Facebook-n'ny mpianatra.
Ireo mpianatra maritrano ao amin'io oniversite io ihany koa dia nametraka sarintany hamantarana ny toerana misy ireo fanafihana, fiampangana fanorisorenana ary hetsika mahery setra hafa ao amin'ny toby. Mizara vaovao ao amin'ny Facebook sy Instagram ny vondrona:
Pikantsary nalaina tao amin'ny kaonty Facebook an'ny ‘FUGA Arquitectura’.
Efa voaroba ve ianao, nampijaliana na niharan'ny herisetra tao amin'ny faritry ny sekoly? Ampio izahay handrakitra ny fotoana sy ny toeranan nitrangan'izany. Amin'ny fanampianareo, dia afaka manao sarintany iraisana isika izay afaka manampy antsika hitaky ny zontsika amin'ny maha-mpianatra. Araho ireo dingana tsotra ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny solosainao na ny findainao.
Ny tetikasa fandraketana an-tsarintany ao Meksika dia tsy voafetra ho amin'ny fanafihana ny mpandeha an-tongotra na halatra fiara ihany. Hatramin'ny taona 2016, namokatra sarintany ifarimbonana andraketana ireo famonoana vehivavy  manerana ny firenena ny vehivavy mpandrafitra fampiharana (developera) iray miasa eo ambadiky ny solonanarana ho fiarovana azy manokana.
Hita fa fitaovana manandanja hiadiana amin'ny heloka bevava ny fandrafetana sy ny fanapariahana ny teknolojia ary indrindra indrindra, hamoronana vondrom-piarahamonina miahy tena mikendry hanagona tahirin-kevitra omen'ireo mpiserasera tenany ihany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/26/128429/
 fitomboan'ny fandikan-dalàna heloka bevava: https://www.animalpolitico.com/2018/02/mexico-inseguro-2017-homicidios/
 noterena hampitsahatra ny famoaham-baovao farany : https://hoyodecrimen.com/acerca
 fanadihadiana an-tserasera: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLSeaRD7kPGtNWzf_6-rDXtK_mb7ZyjgMxmf_1eiFF-odw1g/viewform
 fiampangana herisetra: https://globalvoices.org/2018/09/26/fifty-years-after-the-mexican-movement-of-1968-students-continue-their-march-against-violence-and-impunity/
 sarintany : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12tCMbkMo0JiXnVt_ok0_3kQjn-LlT_kF&ll=19.32523026880299%2C-99.18460249999998&z=14
 sarintany ifarimbonana andraketana ireo famonoana vehivavy: https://globalvoices.org/2017/06/15/one-woman-is-behind-the-most-up-to-date-interactive-map-of-femicides-in-mexico/